ဘာသော့နဲ့ဖွင့်မလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ဘာသော့နဲ့ဖွင့်မလဲ?
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jul 7, 2014 in Think Tank | 15 comments
ညက zuma game ကို ဆော့တယ်။
သွားအောင် pink panther ကာတွန်းကားကိုပြန်ကြည့်တယ်။
ထုံစံအတိုင်း panther က ကားလမ်းကူးမယ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘေးဘီကိုကြည့်ပြီး ရှင်းနေတာပဲ မီးမစိမ်းလဲကူးမဟဲ့
ဝဲယာသွားလာတဲ့ကားတွေ ဝီကနဲ့ဝီကနဲ အမြန်နောက်ဆုတ်
လိုက်ရတယ်။ပလက်ဖောင်းပေါ်ခြေပြန်ချတာနဲ့ သွားလာနေတဲ့ ကားတွေ မရှိတော့ပြန်ဘူး။
ဒါနဲ့အိပ်မယ်ဆိုပြီးမအိပ်ခင် တီဗီ ဘက်ပြန်ပြောင်းပြီး
ဇာတ်လမ်းတွဲက zuma game ဆော့နေကတည်းက
နာသကွာဆိုပြီး တီဗီပြန်ပိတ်မယ်အလုပ်မှာ အထူးသတင်း
ဆက်စောင့်လိုက်တော့ မြန်မာတပြည်လုံးကို စစ်တပ်က
သိမ့်ကနဲ့ ဘီလူးစီးသလို အိပ်နေရာက ဆတ်ကနဲ့
has written 83 post in this Website..
မြန်မာပြည်တွင်မွေးသည်။ မြန်မာပြည်တွင်အရွယ်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာလိုတွေးပြီး မြန်မာလိုပြောတတ်သည်။
View all posts by မင်း ခန့် ကျော် →
ပို့စ် ကို ဖတ်ပြီး
အင်းးး အိပ်မက်က မဆုံးသေးဘူးဆိုတော့ ပြန်အိပ်လိုက်ဦးမယ်
ဒိန်းဒိန်းးးးးးး ဒိန်းဒိန်းဒိန်းး ဟော်လန်
ဟော်လန်ဖလားရမှ ဆက်မက်မယ် အိုက်အိမ်မက်
သာမာန် ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ် အမြင်မှာတော့
၂၀၁၄ မြန်မာပြည် က ၁၉၈၈ မြန်မာပြည် မဟုတ်တော့တာဘဲ။
၁၉၈၈ မှာတုန်း က နိုင်ငံခြားနဲ့ချိတ် စီးပွါးရေး လုပ်နေတဲ့ ချမ်းသာလွန်းနေ တဲ့ ခရိုနီ တွေ မရှိသေး။
၁၉၈၈ မှာတုန်း က နိုင်ငံမငြိမ်လို့ စီးပွါးပျက်မှာ ကြောက်လွန်းတဲ့ သူတွေ က ထိပ်ပိုင်းနဲ့ မပလူး နိုင်သေး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ယူကရိန်း အရေးမှာ ရုရှားဝင်အပြီး အနောက်နိုင်ငံ က ပိတ်လိုက်လို့ ရုရှားခရိုနီ တွေ အကြပ်တွေ့ပြီး နောက်တော့ မစ္စတာပူတင်း လေသံ လျှော့သွားတယ်။
ဒီအချိန် စစ်တပ် က ဘာလုပ်လုပ် အောက်လူ နင်းပြားများ အတွက် ဘာမှ မထူး။
ကိုယ့်ကို ထိမှာ ကြောက်သူချင်း သူတို့ က ပိုပြီး ကိုယ်ထည်ကြီးပါတယ်။
ရှင့် ကိုယ်ထည် ကရော အတော်ကြီးလားဟင်င်င်င်င်င်င်င်င်င်။
ခြေကိုဖော့လို့ အသာကလေးရှေ့ကနေ တတန်းချင်း
ဦးဘယ်သူ ဘယ်မဲဆန်ဒနယ်မြေ ဘာညာပေါ့ဗျာ။
ကျတော့်ကိုပြောရှာပါတယ် အဲ မပြောခင်ပြရှာပါတယ်
လူကြီးမင်ခံဗျားးးတဲ့။ (အဲဒီခံဗျားး စကားကြားရင် တမျိုးကြီးပဲ)
ဖျား ဖျားဖျား :harr:
ဖျားဖျားဖျား တ တာတောင်ဘေးဘီကြည့်ပြီးမှ
ကိုခန့်ရေ …. အပေါ်မှာ အရီးခင်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးဖြေပေးဖို့ အရေးကြီးတယ် မထင်ဘူးလား။ မေးတဲ့သူကတော့ မေးနေပြီ။ ကိုယ်ထည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့။ ခရိုနီလား၊ ခရိုနီ အဆွယ်အပွားလားလို့ မေးနေပြီလေ။
မကြာခင် နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင် မတ်မတ်ရပ်ပြီးအောက်ကိုငုံ့ကြည့်ရင်
မည်သူမှမထောက်ပံ့မကူညီပဲစားသောက်ရ ရင် လက်ရှိဆန်ဆယ်ပြည်
အရီးနဲ့ အမ တို့ ချေးငွေလေးချမပေးချင်ဘူးလာဟင်!!
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းက စရတော့မှာပဲ။ ကိုယ့်အိမ်ကို ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုပါစို့၊ အဲဒီအခါ ဧည့်သည်ကို ဘာစားမလဲ သောက်မလဲ မေးကြတယ်။ ဧည့်သည်ကလည်း ဟာ နေပါစေ၊ ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ စသဖြင့် ယဉ်ကျေးဘွယ်ရာ ငြင်းဆိုကြရတယ်။ အိမ်ရှင်ကလည်း ဧည့်သည်ငြင်းပေမယ့် ရှိတာလေး ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလုပ်ပြီး ကျွေးကြမွေးကြတယ်။ ဧည့်သည်က ငြင်းတိုင်း ကိုယ်ကမကျွေးလို့ဖြစ်မလား၊ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ဖို့က ကိုယ့်တာဝန်လို့ သဘောထားကြတယ်။ ဧည့်သည်ကလည်း အိမ်ရှင်ကျွေးတာကို စားချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မစားချင်သည်ဖြစ်စေ အားနာသမှုနဲ့ စားကြတယ်။ အဲဒီလို …။
တကယ်လို့သာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ဆိုရင်တော့ တီးအော် ကော်ဖီ မေးလို့သူက ဘာမှမစားဘူးမသောက်ဘူးဆိုရင် ဘာမှကို မလုပ်ပေးပါနဲ့။ သူက သောက်မယ်မပြောဘဲ ကိုယ်က သောက်ဖို့လုပ်ပေးရင် သူကလည်း အားနာသမှုနဲ့ စားမှာ သောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လူမျိုးက ဘာအကြောင်းလေးနဲ့မှ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မပြောတတ်ဘူး။
-သေကာနီးလူတစ်ယောက်ကိုတောင် သေတော့မှာ လို့ ပြောရင် မြန်မာ့လူ့အသိုက်အ၀န်းက လက်ခံမလား။ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ထတီးမှာပေါ့။ သေကာမှသေရော့ အဲဒီအမှန်တရားကြီးကိုတော့ ထုတ်ပြောလို့ မရဘူးပေါ့။ အခု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဒီသဘောသွားရှိနေတယ်။ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ပြောချလိုက်ရင် လူတွေ မကျေနပ်ဘူး။ အမေစု ကို သမ္မတ အရမ်းဖြစ်စေချင်နေကြတယ်။ ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရင် ပြောတဲ့လူကို မုန်းတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက တော်တော်လည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ ဒီလို ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို တုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောထည့်လိုက်ရင် ပြသနာတွေ ရှင်းမနိုင်တော့ဘူး။
– ဗေဒင်ဆရာစံဇာဏီဘို ကတော့ ၂၀၁၆မှာ အမေစု သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ ကျမ်းကျိန်သလိုကို ဟောသွားတယ်။ သူမှားသွားရင် ၂၀၁၆ မှာ သူဝန်ခံမှာလား။ လောလောဆယ်တော့ သူ့ကို လူတွေ ကျေနပ်သွားတယ်။ ဒါတစ်မျိုးပဲ ။ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ လူတွေ ဦးနှောက်မသုံးအောင် မှောင်ချလိုက်သလိုပဲ။ ဒီအချိန်ဟာ အရေးကြီးတယ်။ အရေးကြီးချိန်မှာ ဒီလိုဟောချက်တစ်ခုကလည်း အမှောင်တိုက်သွင်းလိုက်သလိုပဲ။ ဟုတ်ပြီ သူဟောတာမှားရင် သူဘာနဲ့လျော်မလဲ။ အဲဒီအခါကျတော့လည်း မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ကာ လူတွေက ပြီးပြီးရောပါပဲ။ ၁၀ချက်ဟောလို့ ၁ချက်မှန်ရင်ကိုပဲ ဒီဗေဒင်ဆရာ မှန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတာ မြန်မာ့စရိုက်ပါပဲ။
– အခု ကိုခန့်က သေမယ့်လူကို သေတော့မှာလို့ ပြောသလိုပဲ။ လူတွေ မခံစားနိုင်ကြဘူး။ သူငယ်နာဆိုတာ ဒါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှု၊ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်မှု။ ပြောချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ အချိန်မရလို့။ ဘာသော့နဲ့ဖွင့်မလဲဆိုတော့ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ပိုးစိုးပက်စက်ပြောတဲ့သော့နဲ့ ဖွင့်မှရမယ်။
ဒီလို နှစ်လမ်းပဲ သွားနေသလား??လို့ကျတော့်ဘာသာ
ကျတော်ကိုယ်တိုင်က အစိုးရကို အလွန်ဝေဖန်ခဲ့
ကျတော့်ကို un-fri ဖေ့ဘုတ်မှာလုပ်တဲ့အထိ)
ဒါပေမဲ့ ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ရေး အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်
တဲ့အချိန်မှာ ခြေ/ဥ ကို အစအဆုံးဖတ်ဖြစ်တယ်။
blogတွေလိုက်ဖတ် အမြင်တွေ လေ့လာ။
ကျတော် စဉ်းစားတာက ဒီလူနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို
ငါးပါးသီလ… အားတိုင်းယားတိုင်းစောင့်နေကြပေမယ်.. မုသာဝါဒကံ. စောင့်ပေမယ့် သီလဖေါက်ပစ်လိုက်ဖို့ကိုတော့.. ဘယ်သူမှဝန်မလေး..။
အမှန်ကို သိရက်နဲ့ ထိန်ချန်တာ.. မပြောတာဟာ.. အပြစ်ကြီးတခုအဖြစ်.. သတ်မှတ်ဖို့လိုမယ်ထင်မ်ိတယ်..
၅ပါးသီလရှိတာမှာ.. ..ဖေါက်ရင်.. အပြစ်ပေး/ခံယူတဲ့.. ကျိန်စာပါ.. ကျိန်ခိုင်းတာတွဲထည့်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
နောက်အံ့သြမိတာတခုက.. ပါ့ဗလစ်လူထုရှေ့ တောင်းပန်တာကို ဖိထောင်းချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ..။
တောင်းပန်တာကို ဖိထောင်းချင်တဲ့စိတ်ရှိနေမှတော့.. ဒီလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း.. ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားကြမယ်… တွေးမရ..။
ရဟန်းသံဃာမျာတောင်.. အပြစ်လုပ် . ၀ိနည်းဖောက်မိရင်.. အာပါတ်ဖြေ(တောင်းပန်) ပြီး ဖြည်လို့ရအောင်.. ဗုဒ္ဓကသတ်မှတ်ပေးမင့်ကို…။
၂၀၁၅ လမ်းကြောင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ဆန်ဒကိုပိတ်တာက ခြေ/ဥ။
ဒီတော့ပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် ခြေ/ဥ ထဲကစည်းကမ်းအတိုင်းပြင်ခွင့်ရှိမယ်။
အသစ်ရေးဆွဲမှရပါမယ်ဆိုရင် ခြေ/ဥကိုဖျက်သိမ်း ဖို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပေးဖို့
ပြင်နိုင်ဖို့က လွတ်တော်နေရာတင်မက အပေးအယူ အပြန်အလှန်ကတိကဝတ်တွေပါလို
ဒီအတွက်ပြည်သူတွေ လူထုရှေ့တောင်းပန်တာကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားဖို့
သူကြီးတို့ အရီးတို့ အမဝင့် တို့ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေက
တိုင်ပြည်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့မြင်ပါတယ်။
us မှာ ခြေ/ဥ တခုကိုပြင်မယ်ဆိုရင်
ဥပမာ- လူတိုင်းသေနပ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာမျိုး။
နောက် us ရဲ့ခြေ/ဥ နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ခြေ/ဥ အနှစ်သာရ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ?
အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ ..ခြေဥမကလို့.. ဘာဥဖြစ်ဖြစ်.. လူကလုပ်တာ.. လူအများစုကပြင်ချင်ရင်.. ပြင်ရမယ်လို့ပါပဲ…။
Since the Constitution was put into effect in 1789, it has been amended twenty-seven times.
Approximately 11,539 proposals to amend the Constitution have been introduced in Congress since 1789. Collectively, members of the House and Senate typically propose around 200 amendments during each two–year term of Congress.
အစပိုင်းမတော့.. ခြေဥပြီးပြီးချင်းလူတွေနဲ့ညှိယူရတာမို့.. တောက်လျှောက်ပြင်သွားပါတယ်..။
အဲဒါကို.. အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းအနေနဲ့.. ပြီးခဲ့တဲ့လကရေးထားတယ်..။
အဆိုပါခေါင်းဆောင်တို့နှင့်သူတို့လမ်းစဉ်များအောက်ဝယ် စစ်(၀ါ)သေနတ်ပြောင်းမှလာသော အာဏာ၏မဏ္ဍိုင်ဖြိုချရေးမှာ လွန်စွာခက်လှမည်ဖြစ်ကာ ဆယ်စုနှစ်များချီကြာမည်ဟု အတတ်ပြောလိုပါသညအဆိုပါဓလေ့ထုံးတမ်းကို ဖေါက်ထွက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုတို့သည် အတွင်းမှလှိုက်၍လာနိုင်သည်မထင်မူပဲပြင်ပ မှသာ လာနိုင်မည်ထင်ပါ၏။
မြန်မာ့ထွက်ရပ်လမ်းကို ဖေါက်နိုင်သူတို့မှာ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်ပရောက် သန်းချီမြန်မာများသာဖြစ်သည်ဟုဆိုချင်သည်။
သူကြီးက ကျတော့်ထက်ပိုစော ပိုမြင်ကြောင်း
အမယ်လေးလေ့… အတိုင်အဖောက် ညှီနေလိုက်ကြတာ… လေးဖက်ထောက်တာကိုပဲ သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ ခြသေ့င်္ မှတ်နေဂျလား မသိ… မဟုတ်ဖူးနေ လေးဖက်ထောက်တာ နင်တို့ကို အနောက်က ချနေ၊ဆော်နေ ချမှာ၊ဆော်မှာ.. သောက်ခွီး